Wedding in midabka cagaaran
Cilmi-nafsiga iyo Xiriirka Qoyska iyo arooska
Midabka cagaaran waa, dabcan, "calaamad" guga, bacriminta, jiritaanka. In aroosyada Dhexe dhexe ayaa doortay dharka cagaaran si ay u muuqdaan bacriminta aad u badan. Hindiya, dhar cagaaran ah oo loogu talagalay aroos ayaa calaamad u ah nabadda iyo rajada, Shiinaha - dhalinyaro iyo caano, iyo dalalka Islaamka - beeraha jannooyinka.
Si kastaba ha ahaatee, arooska cagaaran waa wax u gaar ah dadka, sababtoo ah cagaaru waa dhalashada wax cusub. Sidaa darteed, arooska ugu habboon guga, marka dabeecadda oo dhan ee arooska cagaaran. Wixii xafladaha guga, hooska cagaarka ee cagaarka ayaa ku haboon.
Laakiin, naqshadeeye fiican ayaa kuugu qancin lahaa in cagaarku yahay midab, oo hoosaadka ayaa la qaadi karaa wakhti kasta sanadka. Xilliga xagaaga waxay ku habboon tahay salad cagaaran, xilliga dayrta - saytuunka, xilliga qaboobaha - mugdi, cagaar qani ku ah, xagasha qaar oo bixiya buluug. Xilliga diiran, xulashada guusha-gu waxay noqon doontaa midabka midabka ee arooska. Hooskaan ayaa noqday mid aad u caan ah sannadihii la soo dhaafay.
Dharka cagaaran ee arooska
Sidaa darteed, haddii aadan halis gelin xirashada dharka cagaaran ee arooska, sababtoo ah mukhaadaraadkaaga, waxaad ka heleysaa midab cagaaran oo leh cagaar cagaaran - kuwan waa dhar isku dhafan oo leh khudrado cagaaran, suunka, boodhka. Xulo qalabka wax lagu duubo - hilibka, kabaha, dahabka.
Tan iyo markii aan ku qurxineyno arooska cagaarka, u samee guga illaa dhamaadka - timaha waxaad ku ciribtiri kartaa cawska iyo ubaxa, halkii diademi ah - waxaanu guntaa ubax weyn.
Casuumaad Green ah in arooska
Si martida loo ogaado wakhtiga ay saameeyn ku yeelaneyso, martigelintaada arooska waa inay noqotaa mid cagaaran. Waxaad soo diri kartaa marti-gelinta qaabka cawska lagu qurxiyo oo leh kaar dukumi ah, waxaad ku dari kartaa martiqaad ah caanaha cagaaran, ama si fudud u qurxin kartaa baqshadaha qadiimiga ah ee leh kaararka iyo boodhka cagaaran.
Muuqaalka arooska ee midabada cagaaran waa in midabkani yahay, hooga, adigu waad ka badin kartaa. Waa wax aan macquul ahayn, iyada oo aan jirin xaalado, si ay u diyaarsadaan aroos cagaaran oo cagaaran. Isku darka cagaarka leh cadaan iyo kareem, isku-dar ah cagaar iyo buluug madow, midabka badda wuxuu u muuqdaa mid wanaagsan.
Hoolka waxaa lagu qurxin karaa dhar, ribbons, farshaxanka ubaxa - kan dambe waa inuu ahaado mid farabadan. Miisaska waxay qurxinayaan tufaaxa, dhererka, dherarka leh cawska iyo quraaradaha.
Xubnaha kuraasku waxay doortaan kiisaska caddaanka ah ee qaansooyinka cagaaran, miisaska - miisaska madow ee leh saxan cagaaran.
Qorsheynta miisaaniyadda qoyska
Maxay haweenku isbeddelayaan?
Sidee u noqoneysaa farxad furiinka kadib?
Maxay dadku isfurayaan?
Khatarta ninkeeda - sida loo noolaado?
Sidee u deyn kartaa qof jecel?
Sidee loo dhisaa xiriirka qoyska?
Waxaan rabaa inaan is guursado - maxaan samayn karaa?
Kala guuritaanka Milyaneer
Ninkeeyga saaxiibka ugu fiican
Sida loola qeybsado nin - talo-bixin ku saabsan cilmi nafsiga
In midabkeedu yahay mid aroos ah?
Sidee ayaad uga qayb qaadan kartaa nin aad jeceshahay?
Sida loo doorto kamarad muraayadaha - Talooyin fudud oo loogu talagalay bilowga
Isku-qabso oo la jarjarey jilci
Macaroni - halabuurka
Guryaha - sariiro
Aquarius iyo Aquarius - waafaqsanaanta xiriirka jacaylka
Joodariga loogu talagalay barkadda koobabka
Masaajidka Al Akbar
Sawir guga loogu talagalay sawir sawir
Naqshadeynta qolka hurdiga ah
Disneyland ee Tokyo
Maxay tahay sababta aysan u bixin bisha haddii uusan uur lahayn?
Grapefruit waa mid fiican oo xun
Kaabashka leh beetroot iyo toonta kariska degdega ah
Naqshadaha casriga ah ee daahyada
Pastila - halabuurka
Saqafyada quruxda badan
Hadiyadda ugu wanaagsan ee sanadka cusub